Skydrive, xalka dhibaatooyinka iswaafajinta ee aan la leenahay Microsoft Office | Laga soo bilaabo Linux
Skydrive, xalka dhibaatooyinka iswaafajinta ee aan la leenahay Microsoft Office
Sida aad ku arki karto qoraaladaydii ugu dambeeyay, baryahan waxaan baarayay sida loola shaqeeyo faylasha Microsoft Office oo waxaan xaqiiqdii ku soo gunaanaday in ikhtiyaarka ugu fiican uu yahay in la isticmaalo Skydrive.
Runta waxa ay tahay, weligay dan kamaan helin adeegan, illaa imika markaan isku arko in aan u baahanahay in aan xal u helo mashaakilkooda iswaafajinta ee macaamiishayda.
Runtii waan la yaabay, maadaama ay tahay adeeg si cadaalad ah u dhameystiran una ogolaanaya shaqooyin badan. Xaqiiqdii waa ikhtiyaarka ugufiican 90% dadka dhimanaya ee aan ubaahnayn astaamo aad u horumarsan sida macros iyo sheekooyinkan.
Ku socota kuwa kaliya u baahan inay eegaan dukumiinti oo daabacaan, iyo diiwaanka aan anigu ku daro; Kuma talinayo rakibi Microsoft Office 2007 adoo adeegsanaya khamri tan iyo markii Skydrive waxay leedahay waxa ay u baahan tahay si ay u daboosho baahiyahaaga.
Si loo daabaco feyl waa inaan marka hore daabacnaa (kala soo baxaa) pdf ka Skydrive ka dibna daabacnaa feylka. Xusuusnow in pdf la dhaho waa muuqaalaynta sida aad uga abuurtay Microsoft Office loomana baahna inaad soo degsato noocyada ama sheekooyinkaas
Haddii aad rabto inaad ku dhex darto wax yar oo ka mid ah deegaankaaga, waxaad abuuri kartaa qoraal aad ku furi karto Skydrive sidii inay tahay codsi.
1. Waxaad abuureysaa feyl la yiraahdo skydrive oo leh kuwan soo socda
2. Waxaan u beddeleynaa galka halka aan ku kaydinay faylka oo aan u xilsaarayno rukhsad fulineed
3. Waxaan nuqul ka qaadnaa / usr / bin /
Waa la qabtay !! hadda si fiican ayaan u socodsiin karnaa, adoo riixaya hoose+f2 iyo socodsiinta amarka skydrive sida haddii ay ahayd codsi.
Xitaa waad ku dari kartaa liiskaaga, si ay ugu xigto codsiyada kale ee xafiiska, oo aad ugu dhejiso astaanta skydrive. tan dambe, baari nafsadaada maxaa yeelay anigu ma doonayo inaan sii dheereysto jagadan
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Skydrive, xalka dhibaatooyinka iswaafajinta ee aan la leenahay Microsoft Office
Iyo sidee ku saabsan Google Drive?
Google Drive waa weyn yahay, laakiin malaha 100% docx ama doc waafaqid. hadaad rabto inaad wax yar ka bedesho.
waxa ugu qosolka badan ayaa ah in Docs-ka Google ay aad uga fiican yihiin iswaafajinta docx marka loo eego Libreoffice
Hahaha waa runtaa
Waxaan bartay in dariiqa adag, markii aan CV-ga galiyay iyo isla markii aan ka soo degsaday Google Drive, uu miisas saaray.
google drive kicks skydrive laba jeer. laakiin waxa loogu tala galay ayaa ah in la arko dukumiintiyada lagu abuuray qaababka microsoft iyadoo la iswaafajin karo 100%, markaasi oo kumbuyuutar linuxer ah uu jiito skydrive. mashaariicda cusub ee iskaashigu waxay adeegsadaan google drive, mana jiraan wax lacag lagu siiyo microsoft-keeda oo ah 360 anigu garan maayo waxa
Waxaa sidoo kale lagu daray sida barnaamijyada websaydhka ee Chrome
ma ahan barnaamij ee waa toobiye
Sikastaba, waxay noqotaa mid waxtar u leh kuwa adeegsada dukumiintiyada MS Office.
Dhab ahaan, sidaad sheegatay, waxay ku saabsan tahay nolol u fududeynta macaamiisheenna. daaqadaha kaliya waa inaad laba jibaartaa riix si aad u furto .docx markaa toobiye kastaa wax faa iido ah malahan
Ku jawaab ylecuyer
Sidaad arki doontid, waxaan u isticmaalaa daaqadaha kumbuyuutarkan, haddana ma isticmaalo xafiiska Microsoft, waxaan isticmaalaa Openoffice, waxaanan la shaqeeyaa dokumintiga kordhintiisa asalka ah, ma ahan docx iyo, si cad, waxaan sidoo kale u adeegsadaa beddelkeeda pdf oo ah mid aad wax ku ool ah.
Hagaag, maadaama aad isbedelka ka sameysay xafiiska, waa inaad u beddeshaa Linux 😉
Aad u fiican, mahadnaq aad uwanaagsan ...
Waan ku faraxsanahay inaad ka heshay
Dhibaatada aan arkaa ayaa ah inaadan ka faa'iideysan karin qaabka tooska ah iyo qaababka kale ee garaafka badan qorista qoraalka
dabcan, sidaan kuu sheegay ma jiraan howlo aad u horumarsan. isticmaalka skydrive waxay dan gaar ah u tahay kuwa kaliya ee u baahan inay eegaan dukumiintiyada, daabacaan kuna saxaan heer hoose. Ma sameeyo maqaalka noocan ah si dadku ay ugu sii tiirsanaadaan adeegyada Microsoft. taas cagsigeeda, waa inay u haajiraan xafiiska libre, oo ay bilaabaan inay si toos ah uga qoraan warbixino cusub xafiiska libre, iyagoo og in dukumiintiyadoodii hore laga arki karo skydrive
"Dhibaatada aan arkaayo ayaa ah inaadan ka faa'iideysan karin qaabka tooska ah iyo qaababka kale ee garaafka badan qorista qoraalka"
Kur0tenshi, Caqli ahaan Bill Gates ma siinaynin astaamo isku mid ah qaabka daruurta Ms O oo ay tahay inaad iibsato. Inay ku noolyihiin kuwa yar ee iibsada, waxaan qiyaasayaa shirkadaha qaar. Tusaale ahaan waa Muuqaalka waxaa jira shirkado badan oo adeegsada waxaanan fahamsanahay in Thunderbird aysan gaarin kaligeed ...
Marka in yar la tuuro way fiicantahay, hadii ay tahay inaad cv u dirto shirkad, ujeedadu waa inaad ku sameyso abiword / openoffice / Libreeoffice ka dibna u wareejiso pdf. Waxyaabaha kale ayaa ah in qaabka bilaashka ah tusaale ahaan Google docs uu u akhriyo si yaab leh halka qoraaga boostada uu yiri waa waxyaabo aasaasi ah bilaa macro iyo waxba.
Marka waxaan u maleynayaa skydrive ama ms office web (ama wax kasta oo loogu yeero) inay badan tahay in si dhakhso leh looga baxo dhibaatada. Waxaan sidoo kale u maleynayaa in buugaagta netka ee la imanaya daaqadaha oo aan rabin inay bedelaan nidaamka qalliinka, inay ka fiican tahay ka shaqeynta bogga intarnetka barnaamij. Qoraal wanaagsan !!!!!
Dhab ahaan, waxtarka skydrive ee loogu talagalay dadka isticmaala Linux waa in si sax ah loo daawado dukumiintiyada horey loogu sameeyay xafiiska microsoft, la daabaco oo wax yar laga beddelo. dukumiintiyada cusub FADLAN iska iloobo microsoft iyo xafiiskeeda in waxa kaliya ee inagu dhacayaa ay yihiin madax xanuun, oo la jaan qaado waxa aan ku haysanno Linux. Waan sii ooyi karnaa maxaa yeelay ma haysanno nooc Microsoft Office ah ama si fudud u isticmaalno mid ka mid ah xulashooyinka badan ee aan ku haysanno Linux taas oo aan u arko inay Microsoft siinayso laba laad
Waad ku mahadsantahay macluumaadka inaad ku soo dejiso PDF, hadda waxaan tijaabinayaa xafiiska webapp.
Ku jawaab Karel
Wanaagsan! Waqtigan xaadirka ah waxaan u maleynayaa inay tahay xalka wanaagsan iswaafajinta doc iyo docx.
Waxaan horeyba ugu dhigay darawalka Google si la mid ah.
Buah waxaad heshay wax weyn! mahadsanid !!!
Ku jawaab Samu
Waa ikhtiyaar, dhibaatada ugu weyni waa inaad ku shubato feylashaada daruurta mana aaminsani kan dambe badiyaa.
Shabakada SWL (II): Ubuntu 12.04 iyo ClearOS. Aqoonsiga LDAP